सरकारले कहाँबाट लिँदैछ पौने ४ खर्ब ऋण ? – Action Media
सरकारले कहाँबाट लिँदैछ पौने ४ खर्ब ऋण ?
२३ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेयता सार्वजनिक ऋण ७ खर्ब बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गत फागुनसम्म खुद सार्वजनिक ऋण १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड पुगेकोे छ ।
Prevबेल्जियमले क्रोएसियालाई हरायो
Nextविश्वकप छनोट : नेपालले आज जोर्डनसँग खेल्दै